गाउँपालिकाको फटाहीँ : क्लवलाई दान दिएको जग्गामा संग्रहालय र खोप केन्द्र - Dainik Nepal
गाउँपालिकाको फटाहीँ : क्लवलाई दान दिएको जग्गामा संग्रहालय र खोप केन्द्र
दैनिक नेपाल २०७६ जेठ २ गते १२:५२
काठमाडौं, २ जेठ । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–४ मालु गहतेमा भीमेश्वर क्लबको निजी जग्गामा गाउँपालिकाले जनजाति संग्रहालय र खोपकेन्द्र स्थापना गरेको छ । क्लवका पदाधिकारी, जग्गादातासँग कुनै सहमति नलिई प्रशासनिक दादागिरी देखाउँदै संग्राहलय र खोपकेन्द्र राखिएको हो ।
२०५० सालमा जग्गाधनी पूर्णमाया श्रेष्ठ र स्व. टीकाबहादुर श्रेष्ठले श्री भीमेश्वर क्लबलाई निःशुल्क जग्गा प्रदान गरेका थिए । २०५२ सालमा क्लब स्थापना भएको थियो । २०५५ सालपछि नेतृत्व विघटन भएपछि क्लव सक्रिय थिएन । पुनः क्लव सञ्चालनमा ल्याउने र भवन बनाउने तयारी भएपछि जग्गामा पुग्दा गाउँपालिकाले संग्रहालय र खोपकेन्द्र बनाएको भेटियो ।
तीन आना जग्गामा गाउँपालिकाको दादागिरी देखेपछि जग्गादाता पूर्णमायाले भनिन्,‘मैले यो जग्गा गाउँका युवाका लागि दिएको हुँ, वरिपरिका दाजुभाइहरूका लागि जग्गा दान गरेकी हुँ, आज आएर स्थानीय तहले एक पटक नसोधी जनजाति संग्रहालय खोप केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । यो जग्गा क्लबले उपभोग गर्छ भने ठीक छ, नत्र अरू कुनै पनि संरचना निर्माण स्वीकार्य छैन ।’
क्लवले जग्गादाताको नाम राखेर भवन निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, गाउँपालिकाले जग्गाधनीलाई नै बेवास्ता गरेको छ ।
इता, जनजाति संग्रहालय खोप केन्द्रको भवन निर्माणका क्रममा लाखौँ रुपैयाँ अनिमितता भएको पाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, ठेकेदारको लापरबाहीले भवन निर्माण कार्य अलपत्र बनेको स्थानीयहरूको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार बन्दै गरेको भवनको जग चर्किएको र भित्ता फुटेको छ ।
भवन बनाउँदा एउटा मात्र रड ठड्याएर विनापिलर भवन बनाइएको छ। उक्त भवन निर्माण गर्दा सात हजार इँटा, २ घाना बालुवा, सय बोरा सिमेन्ट खर्चिएको भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष होमबहादुर श्रेष्ठले बताए । भवन निर्माणका लागि जनजातितर्फ ५ लाख र खोप केन्द्रतर्फ ४ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ९ लाख तामाकोशी गाउँपालिकाबाट बजेट बिनियोजन भएको थियो ।
उक्त रकमले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि हाल ५ लाख थप र पहिलाको ९ लाख गरी १४ लाख रकम तामाकोशी गाउँपालिकाबाटै छुट्याइएको हो । भवन अझ अलपत्र छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष इश्वरचन्द्र पोखरेलले सार्वजनिक जग्गा गाउँपालिकाको माथाहतमा रहने भएकाले खोजी नगरिएको बताए । तर, उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको थाहा पाउँदा पाउँदै किन भवन बनाइयो ?
भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष होमबहादुर श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यममा दिएको एक अन्तरवार्तामा ९ लाख रुपैयाँ पाइसकेको त्यस मध्ये ६० हजार बाँकी रहेको बताए ।